I-China Lady Classic Cuff Sheepskin Slipper ifektri kanye nabaphakeli | Yiruihe
I-Lady Classic Cuff Sheepskin Slipper
Isithandani semvu esifudumele futhi esinethezekile kufanele senziwe yi-Australian A level Sheepskin yangempela; futhi ikhafu yesikhumba semvu izokwenza unyawo luzizwe luthokomele ngokwengeziwe; Sebenzisa i-EVA ukwenza i-outsole izokwenza ukushelela ngokuphelele kube lula nokuhamba kalula.
Phezulu: Inkomo Suede
Cuff: Isikhumba semvu
Ikhafu & ulwelwesi ne-insole kwenziwa nge-A Level Australian Sheepskin.
Indawo esebenzayo: Ye-Indoor & Outdoor
Ama-slippers esikhumba semvu ajwayelekile omama abe nathi kusukela ekuqaleni futhi ayintandokazi yangempela kumakhasimende!
Isiliphu isitayela sesitayela esinezambatho esinezikhala ezincane ngaphambili.Iziliphu zinezingubo zokuhlobisa phezulu nemivimbo yendwangu ezungeze amathe.
Zenziwe ngesikhumba sezimvu zikanokusho, zinamasoli aqinile aqinile futhi angatholakali futhi atholakala ngemibala yakudala unyaka wonke.
Uma ufika ekhaya ngemuva komsebenzi onzima wosuku futhi izinyawo zakho zifakwe ezicathulweni ezifudumele ezinjengalezi, uzizwa ukhululekile.Lesi sishibilikisi soboya sifaka isikhumba esikhazimulayo sesikhumba semvu esinolwelwesi obuthambile obuthambile.
Umklamo wekhethelo woboya obukhethekile wenza ama-slippers abe lula ukugqokwa futhi wenza izinyawo zizwakale zibushelelezi kakhulu.Ukwelashwa kwesikhumba sezimvu okuthandekayo ezinyaweni zakho, kuyilapho lesi silayidi sezikhumba semvu esidala senzelwe ukukunika umuzwa wokunethezeka.
Okuwukuphela kwento yenziwe ngezinto ze-EVA, okwenza izwakale ilula uma uhamba. Ngasikhathi sinye, ibuye ibe nokumelana nokugqoka.Uma uhamba endaweni yakho yokhuni oluqinile, ngeke babange umsindo futhi bavuse wonke umuntu.
Ubuhle besikhumba semvu ukuthi uphefumula ngokwemvelo futhi usiza ukugcina izinyawo zakho zinganuki futhi zimanzi, ukuze ukwazi ukugqoka ama-slippers unyaka wonke futhi uhlale uzizwa ukhululekile.
Isitayela sokuklama iminyuzi yakudala, zonke izindwangu zezikhumba zezimvu eziwugqinsi futhi zikhululekile, ziqinisekisa imfudumalo eyengeziwe noma ngabe uhamba endlini noma ngaphandle futhi ngeke uzwe umthwalo. Njengoba sisebenzisa isikhathi sethu esiningi ekhaya, asikho isipho esingcono Ngalezi zicathulo, ngeke ngizwe kubanda kulobu busika.
Langaphambilini I-Lady Assorted Colour Open Toe Sheepskin Slipper
Olandelayo: ILady Colourful Close Toe Sheepskin Slipper
I-Lady Sheepskin Short Boot enemibala ephindwe kabili kuphela
Ingubo ye-Baby Cuff Slipper
I-Lady Sheepskin Slipper ene-PVC sole
ILady Two Belt Sheepskin Slipper
Abesifazane Mule Sheepskin Slipper nge-EVA sole